ICathode Inkcazo kwiKhemistry
I-cathode yi -electrode apho i-electrical current exits. Elinye i-electrode kuthiwa yi-anode. Gcinani engqondweni, ingcaciso eqhelekileyo yangoku ichaza indlela esetyenziswa ngayo inkunkuma efanelekileyo yombane, ngelixa ixesha elininzi likhetho likhoyo lithwala. Oku kungadideka, ngoko iCCD ye-mnenomic ye- cathode yokuhamba ngoku iyakunceda ukuqinisa inkcazo. Ngokuqhelekileyo, okwangoku ihamba kwindlela eyahlukileyo yokunyuka kwe-electron.
Igama elithi "cathode" lenziwe ngowe-1834 nguWilliam Whewell. Livela kwigama lesiGrike elithi kathodos , elithetha "indlela ephantsi" okanye "inzala" kwaye ibhekisela ekutshweni kwelanga. UMichael Faraday waxoxisana noWilliam ngeengcinga zamagama kwiphepha awabhala ngalo kwi-electrolysis. I-Faraday ichaza ngoku ukusetyenziswa kwamandla kwiseli ye-electrolytic ihamba nge-electrolyte "ukusuka eMpuma ukuya eNtshonalanga, okanye, eyomeleza ukunceda imemori, apho ilanga libonakala lihamba khona." Kwiseli ye-electrolytic, ikhoyo ishiya i-electrolyte kwicala lasentshonalanga (ehamba ngaphandle). Ngaphambi koku, uFadaday wayecebise igama elithi "exode", ukulahla "i-dysiode," "i-westode," kunye ne "occiode." Ngexesha likaFaraday, i-electron ayifumananga. Ngeli xesha lemihla, enye indlela yokudibanisa igama kunye nekhoyo ngoku ukucinga nge-cathode njengendlela "yehla" kwii-electron kwiseli.
Ngaba iCathode ichanekile okanye ayibi?
Ubungakanani be-cathode ngokubhekiselele kwi -anode lunokuba luhle okanye lubi.
Kwi -cell electrochemical cell , i-cathode yi-electrode apho ukuncipha kwenzeka khona . Izicatshulwa zithandwa kwi-cathode. Ngokuqhelekileyo, i-cathode yi-electrode engafanele kwisitokisi se-electrolytic esingaphantsi kwe-electrolysis okanye kwi-battery.
Kwibhetri yokukhupha okanye isalathic cell , i-cathode yindawo efanelekileyo.
Kule meko, ion positive zihamba ukusuka kwi-electrolyte ukuya kwi-cathode efanelekileyo, ngelixa i-electron ihamba ngaphakathi kwi-cathode. Ukunyuka kwee-elektrononi kwi-cathode (ephethe ixabiso elibi) kuthetha ukuhamba okwangoku kwi-cathode (ixabiso elihle). Ngoko, isisele se-Daniell galvanic, i-electrode yobhedu yi-cathode kunye nesigxina esihle. Ukuba okwangoku kuguqulwa kwisellu se-Daniell, iselfowuni ye-electrolytic iveliswa, kwaye i-electrode yethusi ihlala isigxina esihle, kodwa ibe yi-anode.
Kwiphubhu yocumpu okanye i-cathode ray tube, i-cathode iyona nto iphela. Yilapho i-electrons ingena kwisixhobo kwaye iqhubekele kwi-tube. I-current current flow flow from the device.
Kwi-diode, i-cathode iboniswe ngumgca ogqityiweyo wesimboli somcibisholo. Ingumda ongenakwenzeka apho uhamba khona ngoku. Nangona ikhoyo ngoku ingaqhutyelwa kuzo zombini izikhokelo nge-diode, ukubizwa ngegama kukuhlala kusekelwe kwindlela ekukhoyo ngayo ngoku.
I-Mnemonics ukukhumbula iCathode kwiKhemistry
Ukongeza kwi-CCD mnemonic, kukho ezinye iimbonelo zokunceda ukuchonga i-cathode ekhemistry:
I-AnOx Red Cat imele i-oxidation kwi-anode kunye nokunciphisa kwi-cathode.
Amagama athi "cathode" kunye "nokunciphisa" zombini unobumba "c." Ukunciphisa kwenzeka kwi-cathode.
Inokukunceda ukudibanisa "ikati" kwisiqwenga njengamkeliyo kunye "no" kwi-anion njengomnikeli.
Kwi-electrochemistry, i-current cathodic ichaza ukuhamba kwe-electron kwi-cathode kwisisombululo. Ixesha langoku-anodic ukuhamba kwee-elektrononi kwisisombululo ukuya kwi-anode.
UMveliso Inkcazo kwiKhemistry
I-Amide Inkcazo kunye neMimandla eKhemistry
Khangela, Jonga, kwaye ubukele
Izixhobo ze-Modern Orchestra
Ngaba iRhafu 'yeNtlawulo' kwixesha elizayo leMelika?
Imiphumo yeNdalo yoTyuwa
Yintoni Okumele Uyazi Ngaphambi Kokubhalisa Iiklasi Zeelwimi eItali
Uqeqesho lwe-Off-Ice lwe-Skaters Skaters: Kutheni, Yintoni, nini, kwaye njani
I-Top Christian Filters ne-Software Accountability
Amagama ayishumi esiNgesi ahlawulwe kwiTshayina
Iindlela ezili-10 zokuzilungiselela ukulungiselela i-LDS Mission